WASHINGTON(Wararka Maanta)-Mareykanka ayaa baaraya cudur aan ilaa iyo haatan la garanin oo saameeyay diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha dalkaas ee ku sugan safaaradda ay ku leeyihiin magaalada Vienna ee dalka Austria.
In ka badan 20 xubnood oo ka tirsan safaaradda ayaa lagu arkay xanuunka oo calaamadihiisu u egyihiin midka loo yaqaanno Havana Syndrom.
Diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha ayaa la sheegay in ay wajahayeen dhibaatada xanuunkan aan la aqoonsanin tan iyo markii uu talada dalka Mareykanka la wareegay madaxweyne Biden bishii January.
Seynisyahannada Mareykanka ayaa sheegay in ay u badan tahay in xanuunkani yahay mid uu sababay kuleylka ay dhaliso korontada.
Markii ugu horraysay waxaa lagu arkay waddanka Cuba intii u dhaxaysay 2016 ilaa 2017-kii.
Diblomaasiyiinta waddamada Mareykanka iyo Canada ee ku sugan magaalada Havana ayaa ka cawday xanuunkaas oo calaamadihiisa qaar ka mid ah lagu sheegay madax wareer, dhac dhac, maqalka oo luma iyo cabsi xad dhaaf ah.
Mareykanka ayaa xilligaa Cuba ku eedeeyay inay diblomaasiyiintooda ku weerareen waxyaabaha dhaliyay xanuunka taas oo ay Cuba beenisay.
Kiisaska Vienna waxaa markii ugu horraysay tooshka ku ifiyay wargayska New York oo maqaal ka daabacay maalintii Jimcada, markii dambena waxaa xaqiijisay wasaaradda Arrimaha dibadda ee Maraykanka oo sheegtay in ay baadhitaan qota dheer ku hayso.
Kiisas kale oo ku saabsan xanuunkan ayaa laga soo tabiyay meelo ka mid ah caalamka, laakiin saraakiisha Mareykanka ayaa sheegay in tirada lagu arkay magaalada Vienna ay ka badan tahay magaalo kasta, marka laga reebo Havana.